Cele hot news
စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သာ ချန်ခဲ့ပါ ရေမွန်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးရုပ်သံ
ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခဘွဲ့ ရရှိသူမှာ မင်း​အောင်လှိိုင် ဖြစ်သော်လည်း အမေစုပုံများသာ ပြန့်နှံနေ
ICJ ၌ တရားရင်ဆိုင်မည့် ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း…see more
သူတို့အသက်ကို လာရန်ရှာရင် အသေပြန်လုပ်မယ်လို့ စစ်ကောင်စီတရားရေးဝန်ကြီးပြောဆို
ရုရှားလုပ်​ေ သ န တ်တွေက အကောင်းဆုံးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်…see more
ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးမှ ဟီး ဟီးဟီးနဲ့ တဖက်လှည့်သွားမူကို ဂျပန်မီဒီယာများမှ အမိအရထုတ်လွှင့်…
Our website address is: http://www.7daynews.co.
Cele hot news1
"ချေးငွေပြန်မဆပ်ရင်တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ လုံးဝမစဉ်းစားထားဘူး။ ဒါက စစ်ကောင်စီနဲ့ မဆိုင်ဘူး" "တောင်ကိုရီးယားနိူင်ငံက မြန်မာကို ဒေါ်လာ ၉သိန်းလှူဒါန်း" (၅) နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦး နှင့်ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်ဝန်ထမ်းရှစ်ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ G7 အစည်းအဝေးအပြီး အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား တင်းမာမှုများ မြှင့်တက် G7 အနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုစစ်ဆေးပေးရန် တရုတ် မိန်းမလေသံပြောင်း တောင်းဆို UN အရာရှိမှ မြောက်ကိုရီးယားက မြန်မာအား ​ဒေါ်လာသုံးသိန်းလှူဒါန်းတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်း ကင်းမရွာကို လှူချင်လို့ သူမ တန်ဖိုးထားရတဲ့ ပစ္စည်းကို မဲဖောက်ရောင်းချလိုက်တဲ့ အလှမယ် ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေးပုံ ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကို စစ်ကောင်စီလုံးဝ ထိန်း ချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြောပြီ ကိုဗစ်နှင့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကြောင့် အငတ်ဘေးကြုံရမည်ကို ငှက်ပျော ပျိုးပင်များကို သင့်လျော်သည့်နှုန်းထားဖြင့် ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြော စစ်တပ်ရဲ့ ကိုယ်စား လှယ်ခန့်အပ်လွှာကို FAO ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ ပယ်ချ ဇန်နဝါရီ လအတွင်း နိုင်ငံတော်ထောက်ပံကြေး ၂သောင်းအောက်မနည်း ထပ်မံပေး အပ်မည် တရားစွဲခံ သရုပ်ဆောင်များ၏ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များကို စစ်ကောင်စီက ဖြု...see more တရုတ် ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘိုင်ဒန် နဲ့ ပူတင် ထိပ်သီးပွဲအ...see more တရုတ်ထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို ဘတ်၁သန်း အာမခံဖြင့် ရောင်း...see more ဒုတိယအကြိမ် (ICJ) ရုံးချိန်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သွားရောက်တတ်မှာလား..? ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးပြောတဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးများရဲ့ အာနိသင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က အမှူကိုပြန်ပြီး ချေပနိုင်တဲ့ အားသာချက်များနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၆နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း နေအိမ်များနှင့် ငွေအားလုံးနီးပါး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူတွေ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို စစ်ကောင်စီအဖြေရှာဖို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးလမ်းပြ ပြည်သူများကို အကုန်ချပြ၍ မရသေးတာတွေရှိနေသေးကြောင်း NUG ပြော ပြန်စရာအိမ်မရှိတော့တဲ့ ကင်းမရွာက အဖွားတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲစရာဖြစ်ရပ် ဖိနပ်လဲ မသုတ်ခိုင်းဘူး ထဘီလဲ မလျှော်ခိုင်းဘူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက် လက်ပြ ဘယ်တော့မှ လုပ်ရန်မသင့်တဲ့ အချက် ၉ ချက်။ ဘယ်တော့မှ မလုပ်မိပါစေနဲ့ မင်းကင်းတွင် လုံခြုံရေးပေါက်ကြားမှုကြောင့် တို က်ခို က်နေမှု နောက်ကြောင်းပြန်ဆုတ်ရ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မှာပဲ ကျမဆိုင်ကယ်ကို လူသုံးယောက်ပေါင်းပြီး ခိုးသွားတဲ့CCTV မှတ်တမ် မိုးရေနဲ့ ထမင်းဘယ်ဟာစားရမလဲ ရောနေတာတောင် အပြုံးမပျက်ရှာတဲ့ GZ လေးတွေ (ရုပ်/သံ) မြန်မာကနေ တရုတ်နိုင်ငံထဲ လမ်းကြောင်းအသစ်ကနေ ဆန်တင်ပို့နေ...see more မြန်မာတွင် ကိုဗစ်ဗီဇပြောင်းပိုးသုံးမျိုးတွေ့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးကို ဂျပန်လဝကမှလေဆိပ်ထိ လိုက်ခေါ်ခဲ့တာ ပထမဆုံးဖြစ် မြန်မာမှာ ဒီမိုကရေစီ အမြန်ဖေါ်ဆောင်ဖို့ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်‌ကြီး...see more မြန်မာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူများ အရေးယူဖို့ ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုပြီ ယခုတလော​ပြန့်နှံ နေတဲ့ ရက်စွဲအလွဲနဲ့ မှတ်နေကြတဲ့ ICJ ရုံးချိန်းသတင်း ယှဉ်ပြိုင်ရင် စင်ပြိုင်တိုက်ဖို့ AK မွာ ကျည်ဖြည့်လိုက်ပြီလို့ပြောလာတဲ့ မင်းကိုနိုင် ရင်ကွဲအသဲကွဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေ မြင်ရတဲ့အချိန်ပဲ ရန်ကုန်ရုံးချိန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲရုံး..see more ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်းများ လအကန့်အသန့်ဖြင့် လျှော့ချပေး သီလရှင် ဝတ်ဖို့ ဆံပင်တွေ ဖျက်ချလို့ ငိုနေတယ် မြင်မိပါလိမ့်မယ် တကယ်တော့...(ရုပ်သံ) အငတ်ဘေးကြုံမှာ စိုးရိမ်နေရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒေါ်လာ သုံးသိန်း...see more အဖြူအစိမ်းကိုခဝါချ မိန်းမသားပေ့မယ့် သုံးဘိန်းလှည်းပေါ်က CDM ဆရာမလေး...see more အမေဖြစ်သူအတွက် သားကင်မ်အဲရစ် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရေးသားစာပေးပို့ “ကင်းမရွာ မီ းလော င်မှုသည် အကြ မ်း ဖ က် လ က် န က် ကို င်များ၏ လုပ်ရပ်သာဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်”